ဝယ်ယူသူတွေ စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ Royal Modern Furniture – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
ဝယ်ယူသူတွေ စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ Royal Modern Furniture
November 20, 2017 နေ့
အခုတစ်ပတ်အင်တာဗျူးကဏ္ဍအတွက် ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှစတင်ကာအရောင်း ပြခန်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Royal Modern Furniture, Myanmar Furniture Co.,Ltd. ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Royal Modern Furniture, Myanmar Furniture Co.,Ltd. အနေနဲ့ (၂၀၀၂)ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှကုန်ကြမ်းများကိုစတင်တင်သွင်းပြီးရုံးသုံး၊ အိမ်သုံးပရိဘောဂများကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၄)ခုနှစ် မှာတော့ ဆိုဖာစက်ရုံကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အရောင်းပြခန်းများစွာကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ကာအရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂများကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုပရိဘောဂပစ္စည်းများအပြင် Interior Decoration ကိုပါချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာကိုလည်းသိရတဲ့အတွက် တာဝန်ရှိသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသိလိုသမျှကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး အရင်ဆုံးဖြေကြားပေးသူရဲ့ အမည်နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးသိပါရစေ။
ဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ ဦးကိုကိုမိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Royal Modern Furniture, Myanmar Furniture Co.,Ltd. ရဲ့ Director တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ပထမဆုံးသိချင်တာကတော့ Home & Office Furniture အပိုင်းပေါ့နော်။ Royal Modern Furniture ကနေ Home & Office Furniture ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်အချိန်ကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးသိပါရစေ။ ဘယ်လိုစိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ စတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲရှင်။
ဖြေ : Home & Office Furniture တွေကို Royal Modern Furniture က (၂၀၀၀)ခုနှစ် အစောပိုင်းတွေကစတင်ပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Royal Modern Furniture ကိုအားပေးတဲ့ Customer တွေကသူတို့ရဲ့အိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်းတွေကိုတိုင်းတာစေပြီး Furniture တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူအစီအစဉ် တကျထားချင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကိုတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ Customer တွေရဲ့ Needs and Wants ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ Customized Furniture များကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး : Home & Office Furniture နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သိပါရစေရှင်။
ဖြေ : အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှမီးဖိုချောင်ခန်းထိ၊ ရုံးတစ်ရုံးရဲ့အရာရှိရုံးခန်းမှ ဝန်ထမ်းများနေထိုင်သည့်အခန်းများအထိ Home & Office Furniture များကို ဝယ်ယူသူ Customer များစိတ်ချမ်းသာအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
မေး : ဝယ်ယူသူတွေအတွက် Customized Package လေးတွေရှိရင်လည်းပြောပေးပါနော်။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ကနေစပြီးသုံးလို့ရပါသလဲရှင်။
ဖြေ : ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ သူတို့သုံးမည့် Budget နဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ Furniture များကိုအဆင်ပြေစွာရရှိအောင် Customized Package တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
မေး : Royal Modern Furniture မှာ Home & Office Furniture အနေနဲ့အမျိုးအမည် ဘယ်လောက်ရနိုင်ပါသလဲ။ အခုလက်ရှိရနိုင်တဲ့ တံဆိပ်အမျိုးအစားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လည်းသိပါရစေ။
ဖြေ : Home & Office Furniture အနေနဲ့ အမျိုးအစားပေါင်းများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာနာမည်ရှိတဲ့ Furniture Brand ပေါင်းများစွာကိုလည်း Royal Modern Furniture Showroom များမှာလာရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
မေး : Home & Office Furniture ရဲ့ အရည်အသွေးအတွက် အာမခံချက်၊ After Sales Services ပေးတာမျိုးရောရှိပါသလားရှင်။
ဖြေ : အရည်အသွေးပိုင်းအနေနဲ့ အာမခံချက်များစွာရှိပါတယ်။ After Sales Services ပေးတာကတော့ Royal Modern Furniture ရဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဟုတ်ကဲ့။ အခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးပါနော်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Interior Design & Decoration အပိုင်းလေးမေးပါရစေရှင့်။ ပထမဆုံး Interior Designer တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးနော်။ Interior Design & Decoration မှာ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်လေးသိပါ ရစေ။ Royal Modern Furniture မှာ Design & Decoration ကိုသီးသန့်စီအပ်လို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသိပါရစေရှင်။
ဖြေ : Interior Design & Decoration မှာ ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့ Hotel, Shopping Mall, Showroom, Restaurant, Condominium အစရှိသည့် Customer တို့ရဲ့ လိုအပ်သည့် အိမ်တွင်း၊ ဆိုင်တွင်းအလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစိတ်တိုင်းကျအတိုင်းအတာ၊ အရောင်၊ ဒီဇိုင်းလက်ရာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ Interior Design & Decoration မှာ Royal Modern Furniture ရဲ့ Designer များကအကြံပြုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်းများကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ပြင်ပမှ အခပေး Designer များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားရှိပါတယ်။
မေး : ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် ဘယ်လိုကုန်ကြမ်းတွေ အသုံးပြုပါသလဲရှင်။
ဖြေ : ကုန်ကြမ်းတွေကတော့ ဝယ်ယူသူရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားများစွာကိုအသုံးပြုပါတယ်။
မေး : တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ Project တွေအပြင် အခုလက်ရှိ Project နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနော်။
ဖြေ : တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Project တွေကများစွာရှိနေပါပြီ။ အခုလက်ရှိအနေနဲ့ Hill Top Condo, Star City Restaurant and Bar, Myanmar Plaza စသည့် Project များစွာရှိနေပါတယ်။
မေး : ဟုတ်ကဲ့။ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပဲဖြစ်ဖြစ် Interior Design & Decoration အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Royal Modern Furniture ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မယ့် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းသိပါရစေ။
ဖြေ : Royal Modern Furniture ရဲ့ Head Office လိပ်စာကတော့ တိုက်အမှတ် (၅)၊ (၅)လွှာ၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေကြီး (ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်ပါ။ Showroom လိပ်စာတွေ ကတော့ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် လေးလွှာ၊ ယုဇနပလာဇာနဲ့ သုံးလွှာ၊ တော်ဝင်စင်တာမှာပါ။ မန္တလေးမှာဆိုရင် လေးလွှာ၊ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာနဲ့ မင်္ဂလာမန္တလေးမှာဆိုင်ခွဲတွေရှိပါတယ်။ ဆက်သွယ်လို့ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ 09421154441, 09421142220, 0973103577, 0973217113တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုသိလိုသမျှကိုအချိန်ပေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Myanmar Home & Décor Magazine မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အိမ်မက်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း Crystal Residence Condo
မစ္စ္စအမ်မလီနှင့် F&B Outlet Design များအကြောင်း